၂၀၁၈ What Car ? မှာ “Best Electric Car” အမည်နဲ့ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Nissan Leaf! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ What Car ? မှာ “Best Electric Car” အမည်နဲ့ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Nissan Leaf!
What Car ? ဆိုတာကတော့ Europe မှာရှိတဲ့ Car-buying brand တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan ဟာတော့ Leaf နဲ့ ၂၀၁၈ What Car ? မှာ “Best Electric Car” အမည်နဲ့ဆုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ What Car ? မှာ Nissan Leaf နဲ့ရရှိခဲ့တာ ဒါပထမဉီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၁ တုန်းကလည်း “Ultra Low Carbon” နဲ့ဆုရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ Leaf model ချင်းကတော့ မတူဘူးပေါ့ဗျာ။ Nissan ဟာ ၂၀၁၁ ကစလို့ Leaf နဲ့ပဲ ဆုပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ Nissan Leaf ဟာဆု ကိုရာဇဝင်နဲ့သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
ဆုရရှိသွားခဲ့တဲ့ The New Nissan Leaf ကို Steve Huntingford ဆိုသူကတော့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ကျက်သရေရှိလှတဲ့ EV ဖြစ်တယ်လို့ချီးမွမ်းထားပါတယ်။ Steve Huntingford ဟာတော့ What Car ? ရဲ့ အယ်ဒီတာတစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ Nissan ရဲ့ What Car ? ၂၀၁၈ မှာဆုက Nissan Leaf နဲ့တစ်ခုတည်းရတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ Nissan ရဲ့ xStorage system နဲ့လည်း “Best Car Technology” ဆု ကိုရရှိခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
“The new Nissan LEAF is the most advanced and accessible 100% electric vehicle on the planet,” said Philippe Saillard, Senior Vice President, Sales and Marketing, Nissan Europe.
The new Nissan Leaf ဟာ နည်းပညာမြင့်မားပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှပ်စစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ Philippe Saillard ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sales and Marketing ဘက်က စီနီယာ President ကအခုလို ဂုဏ်ယူပြီးပြောကြားထားတာဆိုတော့ Nissan Leaf နောက်ဆုံး model ဟာ အရင်က model တွေထက် အများကြီးကောင်းနေအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။
အောက်ပါဗီဒီယိုမှာတော့ Nissan Leaf model အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာအကြောင်းတွေရှင်းပြထားပါတယ်။ ၃ မိနစ်ကျော်တာရှိတာမို့ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ လက်မလွတ်သင့်ပါဘူး။
အပေါ်က ဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့ ProPILOT Tech, ProPILOT park နဲ့ ePedal Tech တွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ProPILOT Park ကတော့ ပါကင်ထိုးတဲ့နေရာမှာ မောင်းသူအနေနဲ့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ System ကပဲ အလိုအလျောက် ထိုးပေးသွားမှာပါ။ ပါကင်မထိုးတတ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ သင့်တော်မယ့် tech လေးတစ်ခုပါပဲ။ ePedal Tech ဟာတော့ ကားထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားတာပါ။ Hiroki Isobe ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ ကားရဲ့အရှိန်အနိမ့်၊ အမြင့် ကိုမောင်းသူကိုယ်တိုင်တိတိကျကျထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ တောင်ကုန်းမှာတောင် ဘရိတ်နှင်းလိုက်ရင် ကားတစ်စီးလုံး လုံးဝကိုရပ်တန့်သွားတဲ့ အထိထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကကောင်းမွန်လာတာပါ။ Nissan ရဲ့နည်းပညာ အသစ်တွေကတော့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေကိုတော်တော်ကြီးလျော့နည်းသွားစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုထဲက ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောသလို The New Nissan Leaf ဟာ “Simply Amazing” ပါပဲ။ Nissan အနေနဲ့ Nissan Leaf model အသစ်ကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစောပိုင်းကစပြီး ကားချစ်သူတွေလက်ထဲအရောက်ပို့နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။